အကုန်အကျ သက်သာသော ကားမောင်းနှင်ခြင်းများ ဆီသို့ … ~ The ICT.com.mm Blog
အကုန်အကျ သက်သာသော ကားမောင်းနှင်ခြင်းများ ဆီသို့ …
ကားမောင်းနင် စီးနင်ကြတဲ့ ရည်ရွှယ်ချက် အမျိုးမျိုး ရှိကြတဲ့အထဲကနေပြီးမှ လူတိုင်း အဆင်ပြေစွာ သက်သာချောင်ချိခြင်း အလေအလွင့် မရှိခြင်း တစ်ခုဆီသို့ ဦးတည်သော အကြံပြုမှု တစ်ချို့ကို ဖော်ပြပါရစေ။ ကားပိုင်ဆိုင်သော သူများအတွက် အသုံးဝင်မယ်လို့ ယူဆရင်း ပြည်တွင်း ကားအွန်လိုင်း ဈေးကွက်ကို ဦးဆောင်နေတဲ့ Motors မှ ရေးသား ထုတ်နုတ် တင်ပြလိုက်ပါတယ်။ ကားမောင်းနင်စီးနင်ခြင်းဟာ တကယ်တော့ မလွယ်လှပါဘူး။ ဆီဖြည့်ရခြင်း၊ ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းရခြင်း၊ ပြန်လည်ပြုပြင်ရခြင်း၊ နိုင်ငံနဲ့အလိုက် အာမခံ ကိစ္စများလုပ်ဆောင်ရခြင်း ၊ဒါတွေဟာ ကားပိုင်ဆိုင်သူတွေရဲ့ လုပ်ဆောင်ရတဲ့ ကိစ္စတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
သင့်ကိုယ်တိုင် အခြေခံ စစ်ဆေးခြင်းနဲ့ ပြန်လည် ပြင်ဆင်ခြင်း
သေချာပါတယ်။ ကားမောင်းနင်၊ ပိုင်ဆိုင်တဲ့သူတိုင်းဟာ ကားပြင်ဆရာတွေမဟုတ်ဘူးဆိုတာ၊ ဒါပေမဲ့ ဒီအချက်လေးတွေကတော့ အနည်းငယ်ရိုးရှင်းသော ပြင်ဆင်ခြင်းတွေ ဖြစ်လို့ အဆင်ပြေမှာပါ။လစဉ် ကားရဲ့ ချောဆီတွေကို စစ်ဆေးပေးပါ။ မပိုလျံနေဖို့ မလျော့နေဖို့ကို ဆီထောက်တံနဲ့ တိုင်းတာ ပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ချို့ယွင်းချက် တစ်စုံတစ်ရာ ရှိပါက ထိုနည်းလမ်းတွေဟာ ပြင်ဆင် စရိတ်ကြီးမားဆီသို့ မရောက်ရှိအောင် ကူညီပေးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကားတာယာ၊အချက်ပြမီး၊ အင်ဂျင် အချက်ပြမီးတွေကို စတဲ့ အရာတွေကို သတိပြုပြီး ချို့ယွင်းမှုတွေကို ပြင်ဆင်တာတွေ့က အစပါရှိပါတယ်။ အကုန်အကျ သက်သာဖို့၊ လောင်စာဆီသက်သာဖို့ နည်းနည်းတော့ သည်းခံ၊ စိတ်ရှည်ရပါမယ်။ တစ်နာရီကို ၆၅ မိုင်၊ ၇၅ မိုင် မောင်းနှင်မဲ့အစား တစ်နာရီကို ၅၅ မိုင်နှုန်းဖြင့် မောင်းနှင်ခြင်းက ပိုပြီး ပိုက်ဆံကို သက်သာစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ စမ်းသပ်မူတွေအရ Honda accord ကိုမောင်းနှင်ရာ တစ်နာရီ ၆၅ မိုင်နှုန်းဖြင့် တစ်နာရီ ၅၅ မိုင်ကို ယှဉ်ပြိုင် မောင်းနှင်ရာတွင် တစ်မိုင်ကို ၄၉ ဂါလံကနေ ၄၂ ဂါလံကိုဒီအချက်လေးတွေကတော့ အနည်းငယ်ရိုးရှင်းသော ပြင်ဆင်ခြင်းတွေ ဖြစ်လို့ အဆင်ပြေမှာပါ။ လစဉ် ကားရဲ့ ချောဆီတွေကို စစ်ဆေးပေးပါ။ မပိုလျံနေဖို့ မလျော့နေဖို့ကို ဆီထောက်တံနဲ့ တိုင်းတာ ပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ချို့ယွင်းချက် တစ်စုံတစ်ရာ ရှိပါက ထိုနည်းလမ်းတွေဟာ ပြင်ဆင် စရိတ်ကြီးမားဆီသို့ မရောက်ရှိအောင် ကူညီပေးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကားတာယာ၊အချက်ပြမီး၊ အင်ဂျင် အချက်ပြမီးတွေကို စတဲ့ အရာတွေကို သတိပြုပြီး ချို့ယွင်းမှုတွေကို ပြင်ဆင်တာတွေ့က အစပါရှိပါတယ်။
တကယ်လို့ သင့်ရဲ့ ကားဟာ ပုံမှန် လောင်စာဆီကိုပဲ ထည့်ဖို့ ပြဌာန်းထားတယ်ဆိုရင်တော့ ပရီမီယံ လောင်စာဆီတွေကို ကားပိုပြေးမယ်၊ မိုင်လစ် ပိုတိုးမယ်ဆိုပြီး ထင်ပြီး ထည့်နေရင် ထူးခြားလာမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ထူးခြားလာမယ်ဆိုရင်လည်း အနည်းဆုံး ပေးနိုင်တာက ဂါလံရဲ့ ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပါပဲ။ ကားတော်တော်များများဟာ ပုံမှန် လောင်စာဆီကိုပဲ အသုံးပြုဖို့ အစထဲက ဒီဇိုင်းဆွဲခဲ့လို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့ ဒီအချက်ဟာ ငွေကြေး ကုန်ကျပိုပြီးတောင်များစေတဲ့အတွက် သိထားပြီး ရှောင်ကြဉ်သင့်တဲ့ ကိစ္စတစ်ရပ် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့ သေချာအောင်လို့ ကားရဲ့ အချက်အလက်တွေ ဖော်ပြထားတဲ့ မန်နျူးယယ် လမ်းညွှန်စာအုပ်ကို ပြန်ပြီး ကြည့်ရူသင့်ပါတယ်။
ထိန်းထားတဲ့ နှုန်းတစ်ခုတွင် မောင်းနှင်ခြင်း
အကုန်အကျ သက်သာဖို့၊ လောင်စာဆီသက်သာဖို့ နည်းနည်းတော့ သည်းခံ၊ စိတ်ရှည်ရပါမယ်။ တစ်နာရီကို ၆၅ မိုင်၊ ၇၅ မိုင် မောင်းနှင်မဲ့အစား တစ်နာရီကို ၅၅ မိုင်နှုန်းဖြင့် မောင်းနှင်ခြင်းက ပိုပြီး ပိုက်ဆံကို အကုန်အကျ သက်သာဖို့၊ လောင်စာဆီသက်သာဖို့ နည်းနည်းတော့ သည်းခံ၊ စိတ်ရှည်ရပါမယ်။ တစ်နာရီကို ၆၅ မိုင်၊ ၇၅ မိုင် မောင်းနှင်မဲ့အစား တစ်နာရီကို ၅၅ မိုင်နှုန်းဖြင့် မောင်းနှင်ခြင်းက ပိုပြီး ပိုက်ဆံကို သက်သာစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ စမ်းသပ်မူတွေအရ Honda accord ကိုမောင်းနှင်ရာ တစ်နာရီ ၆၅ မိုင်နှုန်းဖြင့် တစ်နာရီ ၅၅ မိုင်ကို ယှဉ်ပြိုင် မောင်းနှင်ရာတွင် တစ်မိုင်ကို ၄၉ ဂါလံကနေ ၄၂ ဂါလံကို လောင်စာဆီ စားနှုန်း ကျဆင်းခဲ့ကြောင်း လေ့လာမှုတွေကနေ သိရပါတယ်။ နောက်ပြီး SUV ကားတစ်မျိုး ဖြစ်တဲ့ Toyota RAV4 ကိုစမ်းသပ်မောင်းနှင်ခဲ့ရာ တစ်နာရီ ၇၅ မိုင်နှုန်းတွင် ၃၇ ဂါလံကနေ ၃၃ ဂါလံ ထိကို ကျဆင်းခဲ့ကြောင့် သိရပါတယ်။
မှန်ကန်တဲ့ တန်ဖိုးတစ်ခု ရှိတဲ့ မော်တော်ယာဉ်ကို ရွေးချယ်ခြင်း
ကားတစ်စီးဝယ်ဖို့ အတွက် သင့်ဟာ ဈေးကွက်ထဲ ရောက်ရှိနေတယ်ဆိုရင်တော့ ထိုကားအတွက် တန်ဖိုး အပြည်အစုံကို ကြည့်ရပါမယ်။ နောက်ကျရင် ထိုကားဟာ ဘယ်လောက် ကုန်ကျမယ်။ ဆီစားနှုန်း၊ ပြုပြင် စရိတ်၊ အပိုပစ္စည်း လိုအပ်မှုတွေက အစပေါ့၊ နောက်ထပ်အနေနဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ကို အကျိုးလည်း ပြု ဆီစားလည်း သက်သာတဲ့ ဟိုက်ဘရစ် ကားလို့ခေါ်တဲ့ အင်ဂျင်ကို လျှပ်စစ် မော်တာထောက်ကူထားတဲ့ ကားလေးတွေလည်း ရှိပါတယ်။ ထိုကားတွေဆို အင်ဂျင်ပါဝါ ၁၃၀ဝ စီစီ လောက်ဖြင့် ရနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ – Honda Civic Hybrid.
အထက်ပါ အချက်အလက်တွေဟာ မော်တော်ယာဉ် ပိုင်ဆိုင်သူ၊ ကားမောင်းနှင်သူများ အတွက် အနည်းအကျဉ်း အထောက်အကူပြုမည့်ဟု ယူဆရင်း ရေးသားလိုက်ရပါတယ်။
Newer သူငါဆင်နွှဲ မီးထွန်းပွဲ
Older Microsoftက လာမယ့် နှစ်ပတ်အတွင်း နောက်မျိုးဆက် ၀င်းဒိုးကို ပြသမည်
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ကားဝယ်ရန် ရှာဖွေမှုအများဆုံးမှာ ဆီဒင်/ဆလွန်းကားအမျိုးအစားဖြစ်သည်။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင် ၂၀၁၄ ခုနှစ်က ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် ကားသစ်ဈေးကွက်အတွင်း လမ်းကြမ်းသွား SUV နှင့် Crossover Vehicles (CUVs) များက ဆီဒ...
ပြည်တွင်းကားဈေးကွက်အတွင်း မိသားစုအသုံးပြုရန်ကိုက်ညီသည့် ကားများ ပိုမိုလူကြိုက်များ
တစ်ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာဖြင့် ကလေးမွေးဖွားမှုနှုန်း ကျဆင်းလျက်ရှိသော်လည်း မြန်မာနိုင်ငံတွင်သာမက ကမ္ဘာနိုင်ငံအနှံအပြားရှိ ကားဈေးကွက်များတွ...
Automobile, News, Review
စီးပွါးရေးစွန့်ဦးတီထွင်သူတိုင်း ဆောင်ထားသင့်သည့် app ငါးမျိုး
သင့်ရဲ့စမတ်ဖုန်းက သင့်ရဲ့တစ်နေတာလုပ်ငန်းစဉ်၊ သင့်ရဲ့မိနစ်အချိန်ဇယား၊ သင်အလုပ်နှင့်ပတ်သက်ပြီး သွားရသည့်ခရီးစဉ်နှင့် သင့်ရဲ့မအားလပ်သည့် န...
အရှိန်ပြင်းမောင်းနှင်မှုအတွက် ဒဏ်ကြေးငွေ ဒေါ်လာတစ်သန်းနှင့် အတွေးဖြင့် ထိန်းချုပ်နိုင်သည့် မော်တော်ကား
ကားမောင်းနှင်သူများနှင့် ကားလမ်းမများပေါ်ရှိ ထူးခြားအံ့ဩဖွယ်ကောင်းသော အကြောင်းအရင်းဆယ်ချက် အား Motors.com.mm မှ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ...
မော်တော်ယာဉ်လုပ်ငန်းများအတွက် အမျိုးသားများသာမက အမျိုးသမီးတီထွင်ကြံဆသူများပါရှိသည်ကို ဖော်ပြ ပေးလိုက်ပါတယ်။ မော်တော်ယာဉ်လုပ်ငန်းများအတ...
Apps, Automobile, News, Review
ကားမောင်းနှင်ရာတွင် လွယ်ကူအဆင်ပြေစေမည့် app ငါးမျိုး
ခေတ်မှီကားမောင်း app များအား အသုံးပြု၍ သင့်ရဲ့ ကားမောင်းနေ့ရက်များကို ဖြတ်သန်းလိုက်ပါ နေ့စဉ်နဲ့အမျှ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ချိန်အမ...
အိမ်ခြံ၊ မြေ၊ တိုက်ခန်းရှာသူများအတွက် အကောင်းဆုံး Smartphone Apps
သမာရိုးကျ စနစ်ဖြစ်တဲ့ သတင်းစာနဲ့ အေးဂျင့်များမှ တဆင့် အိမ်၊ခြံ၊မြေ၊ တိုက်ခန်းများ ရှာတဲ့ ခေတ်ဟာ တဖြည်းဖြည်း နဲ့ ဒီဂျစ်တယ် ရှာဖွေရေး...
သမရိုးကျမောင်းနှင်းမှုများနှင့်မတူ ကွဲထွက်နေသည့် အနာဂတ်နည်းပညာငါးမျိုး
ကားမောင်းလိုင်စင်မလိုသည့်အပြင် နာရီပေါင်းများစွာ ရေဓာတ်ဖြည့်တင်းပေးနိုင်သည့် မော်တော်ယာဉ်များ သင်မောင်းနှင်စရာမလိုဘဲ ကားပေါ်တွင်အိပ်နေ...
သင့်အိပ်မက်ကားအား android device များမှတစ်ဆင့် ဝင်ရောက်ရှာဖွေကြည့်ရှူနိုင်ပါပြီ
တစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အွန်လိုင်းကားဈေးကွက်အား ဦးဆောင်နေသည့် (မြန်မာနိုင်ငံတွင် Motors.com.mm ဖြင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေသည့်) Carmudi မှ an...
ကမ္ဘာ့ထိပ်တန်း ချမ်းသာစာရင်းဝင် ဘီလီယံနာငါးဦးရဲ့ ကြီးကျယ်ခမ်းနားသောကားများ ဝယ်ယူစုဆောင်းမှု
မြန်မာနိုင်ငံ၏ မော်တော်ယာဉ်အရောင်းအဝယ် ဈေးကွက်အား ဦးဆောင်နေသည့် Motors.com.mm ကနေပြီးတော့ ကမ္ဘာတစ်လွှား ထိပ်တန်းချမ်းသာစာရင်းဝင် ဘီလီယံ...
မြန်မာပြည်ရောက် ချက်ဗလတ် ကားများ
ချက်ဗလတ်ကားလို့ဆိုလိုက်ရင် ကမ္ဘာကျော် Transformer ရုပ်ရှင်ဇတ်ကားတွေထဲမှာပါဝင်တဲ့ နာမည် ကျော်ကားအမျိုးအစားဆိုတာ နိုင်ငံတကာသာမက မြန်မာနို...